Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.6.1 Amplified arịọ
-Ejikọ gị nnyocha e mere na-dijitalụ metụtara nwere ike ịdị ka arịọ onye ọ bụla ajụjụ gị mgbe niile.
-Arịọ n'ozuzu abịa na abụọ isi ige: sample nnyocha ndị e mere na censuses. Sample nnyocha ndị e mere, ebe ị nweta a obere ọgụgụ nke ndị mmadụ, nwere ike na-eme mgbanwe,-adọ, na dịtụ ọnụ ala. Otú ọ dị, sample nnyocha ndị e mere, n'ihi na ha na-dabere na a sample, na-emekarị kpara ókè na ha mkpebi; na a sample nnyocha e mere, ọ bụ mgbe ike ime ka atụmatụ ndị e mere banyere kpọmkwem ala ógbè ma ọ bụ n'ihi na ụfọdụ omume igwe mmadụ dị iche iche. Censuses, nke ọzọ, anwa-ajụjụ ọnụ onye ọ bụla n'ime ka ọnụ ọgụgụ. Ha nwere oké mkpebi, ma ha bụ n'ozuzu oke ọnụ, dị warara na-elekwasị anya (na ha bụ nanị na-agụnye a obere ọtụtụ ajụjụ), na ọ bụghị adọ (ha na-eme on a ofu oge, dị ka ọ bụla 10 afọ) (Kish 1979) . Ugbu a, were ma ọ bụrụ na-eme nnyocha nwere ike ikpokọta ndị kasị mma e ji mara sample nnyocha ndị e mere na censuses; were ma ọ bụrụ na-eme nnyocha nwere ike ịjụ ajụjụ nile ka onye ọ bụla kwa ụbọchị.
O doro anya na nke a nọgidere na, ubiquitous, mgbe niile-na nnyocha e mere bụ ụdị na-elekọta mmadụ na sayensị fantasy. Ma, o yiri ka anyị malite ịgụta a site na ijikọta nnyocha e mere ajụjụ si a obere ọnụ ọgụgụ nke ndị na dijitalụ metụtara n'ebe ọtụtụ ndị nọ. M na-akpọ nke a ụdị Nchikota adịkwu-arịọ. Ọ bụrụ na mere nke ọma, ọ pụrụ inyere anyị aka na-enye atụmatụ na ndị ọzọ na mpaghara (n'ihi nta ala ebe), ihe granular (n'ihi na ụfọdụ omume igwe mmadụ iche iche), na ndị ọzọ bịara n'ezi oge.
Otu ihe atụ nke adịkwu ajụ-abịa site ọrụ nke Joshua Blumenstock, bụ onye chọrọ na-anakọta data ga-enyere ndu mmepe n'ime Mba dara ogbenye. More kpọmkwem, Blumenstock chọrọ ike a usoro tụọ akụ na ụba na ọdịmma nke jikọtara izu ezu nke a onuogugu na mgbanwe na ugboro ole nke a nnyocha e mere (Blumenstock 2014; Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . N'ezie, M ugbua kọwara Blumenstock ọrụ ná mkpirikpi Isi nke 1.
Iji malite, Blumenstock partnered na ndị kasị ibu na ekwentị mkpanaaka na-eweta na Rwanda. The ụlọ ọrụ nyere ya anonymized azụmahịa ndia si 1.5 nde ahịa ekpuchi omume site 2005 na 2009. The ndekọ a nwere ozi banyere ọ bụla na oku na ozi ederede dị ka mmalite oge, oge, na nkebi ebe nke bere ubé ahụ na-erite. Tupu anyị amalite-ekwu okwu banyere mgbakọ na mwepụ mkpa, ọ bụ uru pụta ìhè na nke a nzọụkwụ mbụ wee bụrụ otu n'ime ihe kacha siere. Dị ka a kọwara n'Isi nke 2, ọtụtụ digital Chọpụta data bụ keerughi na-eme nnyocha. Na, ọtụtụ ụlọ ọrụ ezi ezi-ala azụ ịkọrọ ha data n'ihi na ọ bụ na nzuzo; na bụ ndị ahịa ha-eleghị anya na-atụ anya na ha na ndekọ ga-akọrọ-ke nnukwu-na-eme nnyocha. Na nke a, ndị na-eme nnyocha were ịkpachara anya iji anonymize ndị data na ọrụ ha họpụtara a-atọ ndị ọzọ (ie, ha IRB). Ma, n'agbanyeghị mgbalị ndị a, ndị a data na-eleghị anya ka amata na ha yiri nwere mwute ozi (Mayer, Mutchler, and Mitchell 2016; Landau 2016) . M ga-alaghachi ndị a usoro ziri ezi ajụjụ n'Isi nke 6.
Cheta na Blumenstock nwere mmasị ji atụ akụ na ụba na ọdịmma. Ma, àgwà ndị a ha na-adịghị na oku ndia. Ndị ọzọ okwu, a oku ndia na-ezughị ezu maka nke a nnyocha, a ananu digital metụtara na e-atụle n'ụzọ zuru ezu na n'Isi 2. Ma, ọ Etie na oku ndia eleghị anya nwere ụfọdụ banyere akụ na ụba na ọdịmma. Ya mere, otu ụzọ nke na-arịọ Blumenstock mbụme nwere ike ịbụ: o si ekwe omume ịkọ otú mmadụ ga-azaghachi a nnyocha e mere dabeere na ha digital Chọpụta data? Ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ, site na-arịọ mmadụ ole na ole anyị nwere ike maa azịza nke onye ọ bụla ọzọ.
-Amata nke a empirically, Blumenstock na nnyocha na-enyere aka si na Kigali Institute of Science and Technology akpọ a sample nke ihe dị ka otu puku na ekwentị mkpanaaka ahịa. The eme nnyocha kọwara na ihe mgbaru ọsọ nke oru ngo ka sonyere, jụrụ maka nkwenye ha ejikọta ihe nnyocha e mere Ibọrọ na oku ndia, wee jụọ ha ọtụtụ ajụjụ tụọ ha akụ na ụba na ọdịmma, dị ka "Ì nwere a radio? "na" ị nwere igwe? "(lee Chọpụta 3,11 maka a ele mmadụ anya n'ihu ndepụta). Ndị niile sonyere na nnyocha e ụgwọ atụrụ n'ụzọ ego.
Next, Blumenstock eji a abụọ-nzọụkwụ usoro ọsọ ke data sayensị: feature engineering sochiri chịkwara mmụta. Akpa, na feature engineering nzọụkwụ, onye ọ bụla nke na-gbara ajụjụ ọnụ, Blumenstock converted na oku ndia n'ime a set nke e ji mara banyere onye ọ bụla; data ọkà mmụta sayensị pụrụ ịkpọ ndị a e ji mara "atụmatụ" na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị ga-akpọ ha "variables." Dị ka ihe atụ, n'ihi na onye ọ bụla, Blumenstock gbakọọ ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị na ọrụ, ọnụ ọgụgụ nke iche ndị mmadụ siworo na kọntaktị na, na ego ego nọrọ na mgbasa, na na. Critically, mma mma engineering na-achọ ihe ọmụma nke research ọnọdụ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti ụlọ na ndị mba oku (na anyị nwere ike na-atụ anya ndị na-akpọ mba ndị bara ọgaranya karị na-), mgbe ahụ, a ga-mere ke feature engineering nzọụkwụ. A na-eme nchọpụta na obere nghọta nke Rwanda nwere ike ọ gaghị na-agụnye nke a mma, mgbe ahụ, amụma arụmọrụ nke nlereanya ga-ata ahụhụ.
Next, na chịkwara mmụta nzọụkwụ, Blumenstock wuru a mgbakọ na mwepụ nlereanya ikwu ihe ga-nnyocha e mere omume n'ihi na onye ọ bụla dabeere na ha atụmatụ. Na nke a, Blumenstock eji logistic nlaghachi azụ na 10-anọghị n'ogige atụrụ cross-nkwado, ma ọ gaara eji mee a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ na mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ igwe mmụta na-eru nso.
Ya mere otú ọma mere na ọ na-arụ ọrụ? Bụ Blumenstock ike ịkọ azịza-elegharị ajụjụ dị ka "Ì nwere a na redio?" Na "Ì nwere a ịnyịnya ígwè?" Site na iji atụmatụ ewepụtara oku ndia? Ụdị. Izi ezi nke amụma ndị dị elu maka àgwà ụfọdụ (ọgụgụ 3.11). Ma, ọ bụ mgbe niile dị mkpa iji ya tụnyere a mgbagwoju amụma usoro megide a dị mfe ọzọ. Na nke a, a dị mfe ọzọ bụ na-ekwu na onye ọ bụla ga-enye ndị kasị azịza. Dị ka ihe atụ, 97,3% kọrọ owning a radio ma ọ bụrụ na Blumenstock ama buru amụma na onye ọ bụla ga na-akọ owning a radio o nwere ihe ziri ezi nke 97,3%, nke bụ ihe ijuanya yiri arụmọrụ nke ya ihe mgbagwoju usoro (97.6% ziri ezi). Yabụ, niile fancy data na ịme ngosi uwe ụba izi ezi nke amụma si 97,3% na 97,6%. Otú ọ dị, n'ihi na ajụjụ ndị ọzọ, dị ka "Ì nwere a ịnyịnya ígwè?", Ndị amụma mma site 54,4% na 67,6%. More n'ozuzu, Ọgụgụ 3.12 egosi maka àgwà ụfọdụ Blumenstock adịghị mma karịa nnọọ na-eme ka ndị dị mfe ntọala amụma, ma na ndị ọzọ na àgwà e nwere ụfọdụ mma.
Ọgụgụ 3,11: Predictive ziri ezi n'ihi na ndekọ ọnụ ọgụgụ nlereanya zụrụ azụ na oku ndia. Results si Isiokwu 2 of Blumenstock (2014) .
Ọgụgụ 3.12: Comparison of amụma ziri ezi n'ihi na ndekọ ọnụ ọgụgụ nlereanya zụrụ azụ na oku ndia ka mfe ntọala amụma. Ihe na-ubé jittered zere yitewere; -ahụ Isiokwu 2 of Blumenstock (2014) maka kpọmkwem ụkpụrụ.
Mgbe a na isi i nwere ike iche na a na ya pụta bụ a bit-akụda, ma nanị otu afọ mgbe e mesịrị, Blumenstock na abụọ ndị ọrụ ibe-Gabriel Cadamuro na Robert On-ebipụta a akwụkwọ na Science na n'ụzọ mma na ya pụta (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . E nwere isi ihe abụọ na oru ihe maka mmelite mma: 1) Ha na-eji ihe ọkaibe ụzọ (ie, a ụzọ ọhụrụ na-enwe injinịa na a ọzọ ọkaibe igwe mmụta nlereanya) na 2) karia agbali infer Ibọrọ onye nnyocha e mere ajụjụ (eg, "Ì nwere a na redio?"), ha nwara infer a ọtụtụ ndị mejupụtara akụ na ụba index.
Blumenstock na ndị ọrụ ibe gosiri arụmọrụ nke ha ịzụ na ụzọ abụọ. Mbụ, ha chọpụtara na ihe ndị ha na sample, ha pụrụ ime a mara ezigbo mma ọrụ nke ịkọ akụ na ụba ha si oku ndia (ọgụgụ 3.14). Nke abụọ, ma na mgbe ọzọ ihe, Blumenstock na ndị ọrụ ibe gosiri na ha usoro nwere ike na elu-edu atụmatụ nke ala nkesa nke akụ na ụba na Rwanda. More kpọmkwem, ha na-eji ha ígwè mmụta nlereanya, nke e nyere ọzụzụ on ha sample nke ihe dị ka 1,000 mmadụ, ikwu ihe ga-akụ niile 1.5 nde mmadụ na oku ndia. Ọzọkwa, na geospatial data agbakwunyere na oku na-aga data (na-echeta na oku na-aga data na-agụnye ọnọdụ nke kacha nso cell ụlọ elu maka ọ bụla na oku), na-eme nnyocha nwee kwuru kpọmkwem ebe obibi nke onye ọ bụla. Ibute abụọ ndị a atụmatụ ọnụ, ndị nnyocha na-emepụta ihe atụmatụ nke ala nkesa ụtụ magazin akụ na ụba na oké ezi gbasara ohere granularity. Dị ka ihe atụ, ha nwere ike na-eme atụmatụ na nkezi akụ na ụba nke ọ bụla n'ime Rwanda si 2148 sel (ndị kasị nta administrative unit na mba). Ndị a buru amụma na ụba ụkpụrụ ya bụ otú granular ha bụ ndị siri ike ilele. Ya mere, ndị na-eme nnyocha aggregated ha pụta na-emepụta atụmatụ nke nkezi akụ na ụba nke Rwanda si 30 distrikti. Ndị a district-larịị atụmatụ e mere na-ike metụtara atụmatụ e mere si a gold ọkọlọtọ omenala nnyocha e mere, Rwandan omume igwe mmadụ na Health Survey (ọgụgụ 3.14). Ọ bụ ezie na atụmatụ e mere si abụọ na isi mmalite ndị yiri, na atụmatụ e mere si Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya dị ihe ugboro 50 ọnụ ala karịa na 10 ugboro ngwa ngwa (mgbe na-eri na tụrụ na okwu nke variable-akwụ ụgwọ). Nke a dị ịrịba ama ọnụ ke-eri pụtara na kama ịbụ na-agba ọsọ ọ bụla afọ ole na ole-ka bụ ụkpụrụ omume igwe mmadụ na Health nnyocha ndị e mere-ngwakọ nke obere nnyocha e mere jikọtara na nnukwu digital Chọpụta data nwere ike na-agba ọsọ kwa ọnwa.
Ọgụgụ 3,13: schematic nke Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Call data site na ekwentị ụlọ ọrụ na-converted a matriks na otu n'usoro maka onye ọ bụla na otu kọlụm nke ọ bụla feature (ie, variable). Ọzọ, na-eme nnyocha wuru a chịkwara mmụta nlereanya ikwu ihe ga-nnyocha e mere na-azaghachi site n'ihu site Njirimara matriks. Mgbe ahụ, ndị chịkwara mmụta nlereanya e ji impute nnyocha e mere na-azaghachi onye ọ bụla. N'ikwu eziokwu, na-eme nnyocha na-eji Ibọrọ nke banyere otu puku ndị mmadụ impute akụ banyere otu nde mmadụ. Ọzọkwa, na-eme nnyocha mere atụmatụ na kpọmkwem n'ebe obibi niile 1.5 nde mmadụ dabeere na ọnọdụ nke ha oku. Mgbe abụọ ndị a atụmatụ e mere e jikọtara-eme atụmatụ na akụ na ụba na-eme atụmatụ ebe obibi-ya pụta yiri atụmatụ e mere si omume igwe mmadụ na Health Survey, a gold ọkọlọtọ omenala nnyocha e mere (ọgụgụ 3.14).
Ọgụgụ 3.14: Results si Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Na onye-larịị, na-eme nnyocha nwee eme a ezi uche n'ọrụ mgbe ịkọ mmadụ akụ na ụba ha oku ndia. The kwuru nke district-larịị akụ na ụba-nke e dabeere onye-larịị kwuru nke akụ na ụba na ebe obibi-ya pụta yiri pụta si omume igwe mmadụ na Health Survey, a gold ọkọlọtọ omenala nnyocha e mere.
Ná mmechi, Blumenstock si Amplified arịọ obibia jikọtara nnyocha e mere data na dijitalụ Chọpụta data na-emepụta atụmatụ tụnyere na gold ọkọlọtọ nnyocha e mere atụmatụ. Nke a karịsịa atụ nwekwara anam ẹfiọk ụfọdụ n'ime ahia-offs n'etiti adịkwu ajụ na omenala nnyocha e mere na ụzọ. Akpa, adịkwu arịọ atụmatụ ndị ọzọ adọ, n'ụzọ dị ọnụ ala karịa, na ndị ọzọ granular. Ma, n'aka nke ọzọ, n'oge nke a, na ọ dịghị ike usoro iwu ihe ndabere maka ụdị adịkwu ajụ. Ya bụ, nke a otu ihe atụ na-egosi mgbe ọ ga-arụ ọrụ na mgbe ọ na-agaghị. Ọzọkwa, The Amplified ajụ obibia adịghị ma ka nwee ezi ụzọ gụpụta ejighị ihe n'aka na gburugburu ya atụmatụ. Otú ọ dị, adịkwu ajụ ukwuu njikọ atọ nnukwu ebe ke ọnụ ọgụgụ-nlereanya dabeere na post-stratification (Little 1993) , imputation (Rubin 2004) , na obere-ebe ọnu (Rao and Molina 2015) a kpọkwara ya otú ahụ ka m na-atụ anya na ọganihu ga- -abụ ngwa ngwa.
Adịkwu ajụ ndị a bụ isi uzommeputa nwere ike ahaziri iji gị akpan akpan idaha. E nwere ihe abụọ Efrata na nzọụkwụ abụọ. The abụọ sie 1) a digital Chọpụta dataset na dị obosara ma mkpa (ya bụ, o nwere ọtụtụ ndị ma ọ bụghị ozi ị na mkpa banyere onye ọ bụla mmadụ) na 2) a nnyocha e mere na bụ warara ma oké (ya bụ, o nwere nanị ole na ole ndị mmadụ, ma o nwere ihe ọmụma na ị chọrọ banyere ndị). Mgbe ahụ, e nwere abụọ nzọụkwụ. Akpa, maka ndị ma data isi mmalite, ewu a igwe mmụta nlereanya nke na-eji dijitalụ Chọpụta data ịkọ nnyocha e mere na-aza. Ọzọ, eji na igwe mmụta nlereanya na-impute nnyocha e mere na-aza, nke onye ọ bụla nọ digital Chọpụta data. N'ihi ya, ọ bụrụ na e nwere ụfọdụ ajụjụ ị chọrọ ịjụ ndị nza nke ndị mmadụ, anya n'ihi na dijitalụ Chọpụta data site na ndị a pụrụ iji mee ịkọ ha zara.
Atụnyere Blumenstock si mbụ na nke abụọ iji na nsogbu na-egosi otu ihe dị mkpa banyere mgbanwe site abụọ oge na-atọ oge na-eru nso ka elegharị research: mmalite bụghị ọgwụgwụ. Ya bụ, ọtụtụ ugboro, mbụ obibia ga-abụ ihe kasị mma, ma ọ bụrụ na-eme nnyocha na aka iso na-arụ ọrụ, ihe nwere ike ịka mma. More n'ozuzu, mgbe eleru ọhụrụ bịara ibi nwatakịrị na-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ, ọ dị mkpa ime ka abụọ dị iche nwete: 1) Olee otú nke a na-arụ ọrụ ugbu a na 2) otú ọma ka i chere nke a pụrụ ịrụ ọrụ na-eme n'ọdịnihu dị ka data odida obodo mgbanwe na dị ka na-eme nnyocha itinyekwu uche ná nsogbu ahụ. Ọ bụ ezie na, na-eme nnyocha na-azụ iji mee ka ndị mbụ ụdị nwale (otú ezi bụ nke a karịsịa mpempe research), nke abụọ bụ mgbe ihe dị mkpa.